Yaaliin MM Abiy Somaaliyaa fi Somaalilaand walitti fiduuf taasisaa jiran danqaan mudate – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaaliin MM Abiy Somaaliyaa fi Somaalilaand walitti fiduuf taasisaa jiran danqaan mudate
MM Itophiyaa Abiy Ahimad (PhD) yaaliin Pirezidaantoota Somaaleefi biyya walabummaashee labsitee kan Somaalilaandi jidduutti walitti dhufeenya isaanii cimsuuf taasisaa turan danqaan mudachuu gaazexaan ‘East Africa’ jedhamu gabaase.
(bbcafaanoromoo)–Haaluma kanaanis karoora MM Abiy Pirezidaantii Somaaliyaa waliin ta’uun magaalaa guddoo Somaaliilaandii kan taatee, Hargeessaa dowwachuuf qabatan mormiin mudate.
Gaazexaan kun akka gabaaseettis, yaadni dowwannaa MM Abiyyiin dhiyaate kunis kaayyoonsaa walitti dhufeenya bulchitoota Somaaliyaafi Somaalilaand jidduu jiru fooyyeessuu irratti kan xiyyeeffateedha.
Erga Somaaliyaatti wal waraansi ka’uun mootummaan jiddugaleessaa kufee kaasee, Somaalilaand biyyoota biraatiin ykn dhaabbilee idil addunyaatiin beekamtii ifa ta’ee argachu baattus, walabummaa motummaa ofii labsuun, mootummaa karaa dimokiraatawaa ta’een filatame hundeeffatte jirti.
Yaa’ii Gamtaa Afriikaa jalqaba baatii kanaatti Finfinneetti taa’ameen wal qabatees, MM Abiy Pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahii Mohaammad- Farmaajoo fi pirezidaantii Somaalilaand Musaa Biihii Abdii waajjirasaaniitti affeerruun dubbisaniiru.
Wayituma kanattis Pirezidaantiin Somaaliyaa ajjeechaa baroota 1980 keessaa Somaaleelaandii keessatti raawwatameef dhiifama gaafataniiru.
Pirezidaantiin Somaaleelandiis gaaffii dhiifamaa dhiyaate kan fudhatani turan ta’ulleen, akka miseensoota mana maree biyyasaaniitti himaniitti garuu gaaffiin dowwannaa Farmaajoo kan ‘bitaa namatti galuudha’ jedhaniiru.
Ministiirri Ittaanaan Somaalilaandi Liiban Yuusuuf Osmaan yaada dhimma kanarratti kennan jedhameen ammoo, dowwannichi kan hintaanee akka ta’e himaniiru.
”Dowwannaan Farmaajoo Rippabilika Somaleelaaandiitti taasisan abjuu gonkumaa hin dhugoomne ta’usaatiin alattis, karoora fiixaan hinbaaneedha,” jedhaniiru Ministirichi.